ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအတွက်ဖရဲသီးအစားအစာ: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များ - Keto Eat&Fit
သေးသွယ်မှု၊ မိန်းကလေးတိုင်း၊ မိန်းကလေးတိုင်း၊ မိန်းမတိုင်းသည်အိပ်မက်မက်သည်။မျှတသောလိင်ကိစ္စသည်မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်မဆိုလိုချင်သောရလဒ်ကိုလိုက်ဖမ်းရန်မကြိုးစားပါ။သို့သော်ကြမ်းတမ်းသောအစာများစားလျှင်၎င်းတို့သည်ယာယီသာဖြစ်သည်။ထိုသူတို့ကိုအနည်းငယ်မျှသာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ဒါဆိုမင်းဘာလုပ်နိုင်လဲ။
ဖရဲသီးစားပါ။ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီအသီးဟာမင်းကိုပုံသဏ္န်ကျစေပြီးမလိုအပ်တဲ့ပေါင်တွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ့်ဒီ berry သီးပါ။ထို့ပြင်၎င်းသည်အလွန်အရသာရှိပြီးကျန်းမာစေသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသောအခါ" စင်းလုံးဝေလငါး" ကိုမှန်ကန်စွာသုံးနည်းကိုဒီဆောင်းပါးကအသေးစိတ်ပြောပြလိမ့်မယ်။
ဖရဲသီးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဘယ်ရီသီးဖြစ်ပြီးကလေးများနှင့်လူကြီးများကစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေသည်။လူတိုင်းကသူ့ရဲ့လန်းဆန်းတဲ့အရသာနဲ့ခံတွင်းထဲမှာအသားတွေအရည်ပျော်တာကိုကြိုက်တယ်။၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည်၎င်းသည်လူသားအာဟာရအတွက်အဖိုးတန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်ရီသီး ၁၀၀ ဂရမ်တွင်အာဟာရတန်ဖိုး
အဆီနှင့်အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ် ၀. ၁ ဂရမ်၊
အမျှင်ဓါတ် - ၀. ၄ ဂရမ်;
ပရိုတိန်း - ၀. ၆ ဂရမ်;
ဘိုဟိုက်ဒရိတ် - ၅. ၈ ဂရမ်;
ရေ - ၉၂. ၆ ဂရမ်
ဖရဲသီးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ ၎င်းသည်ဖောလစ်အက်ဆစ်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။သို့သော် berry သီးသည်မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့်လေထိုးခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်ဤ berry ကိုပမာဏအများကြီးစားသုံးရန်မထောက်ခံပါ။
နို့တိုက်မိခင်များအတွက်ဖရဲသီးစားခြင်းသည်နို့ထွက်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။ထို့အပြင် minke ဝေလငါးသည်အရသာရှိသော၊ ကျန်းမာ။ သဘာဝစိတ်ကျရောဂါကုဆေးဖြစ်သည်။
ဖရဲသီး - ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောကယ်လိုရီများ
စင်းဘယ်ရီသီးတွင်အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်သော fructose မရှိသလောက်ပါ ၀ င်သည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖရဲသီး ၁၀၀ ဂရမ်သည်
လတ်ဆတ်တဲ့ဘယ်ရီ - ၂၅-၃၀ ကယ်လိုရီ;
စည်သွပ်ဘူး - ၃၇-၃၈ ကယ်လိုရီ;
ဖရဲသီးဖျော်ရည် - ၃၈ ကယ်လိုရီ
အသားဓာတ်ကိုအပြည့်အ ၀ ချေဖျက်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို ဦး တည်လိမ့်မည်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖရဲသီး ၁၀၀ ဂရမ်မှာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၅. ၈ ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။၎င်းတို့အများစုသည် fructose - အဆီစုပ်ယူမှုကိုအထောက်အကူမပြုသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏အသုံးဝင်ဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ဖရဲသီးသည်အဓိကအားဖြင့်ရေဓာတ်ပါဝင်သောကြောင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ဗီတာမင်များစွာမရှိပေ။ဒါပေမယ့်ဒီ berry သီးရဲ့တန်ဖိုးကိုလုံးဝမလျော့စေပါဘူး။၎င်း၏အစေ့များတွင်ပြည့်ဝဆီများသောအက်ဆစ်များပါ ၀ င်သည်။
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု၌ "minke" ၏ပျော့ဖတ်သည်:
ထို့အပြင်ဖရဲသီး၏ဖွဲ့စည်းမှုလည်းပါ ၀ င်သည်။
၎င်း၏ watery texture ကြောင့်၎င်းသည်အမြန်ပြည့်ဝမှုကိုအားပေးသည်။ဘယ်ရီသီးတွင်ပါသော diuretic အာနိသင်ကြောင့် slags၊ ပိုလျှံသောအဆီနှင့်ကိုလက်စထရောများကိုခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်ပစ်သည်။
"minke whale" ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည်အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်၍ အစာကိုညအချိန်တွင်စားနိုင်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဖရဲသီးအသုံးပြုခြင်းမှအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို mono-diet ၏ကျမ်းဂန်များအတိုင်းသုံးခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။
အချိုးအစားမင်းရဲ့ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်မှာဘယ်ရီသီး ၁ ကီလိုဂရမ်သို့သော်တစ်နေ့လျှင်ဖရဲသီး ၅ ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုပါ။
အစားအသောက်နိယာမအရည်၏အဓိကအခန်းကဏ္, မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ diuretic အာနိသင်ဖြစ်သည်။အသီးဖျော်ရည်စားသုံးခြင်း။
သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနေစဉ်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ရုတ်တရက်ဗိုက်ဖောင်းခြင်း၊ လေအောင့်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းတွေ့ပါကအစာကိုရပ်ဆိုင်းသင့်သည်။အရာအားလုံးအဆင်ပြေရင်ငါးရက်လုံးသည်းခံနိုင်တယ်။
ဖရဲသီးစားသုံးခြင်းသည်ပိုလျှံသောအရည်များကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသည်၊ ထို့ကြောင့်ရေဟန်ချက်ကိုထိန်းရန်သင်တစ်နေ့တာအတွင်းသန့်စင်ထားသောရေသန့်တစ်လီတာခွဲ (သို့) လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်ထားသောလက်ဖက်ရည်ကိုသောက်ပြီးအရက်မသောက်ပါနှင့်။
ပေါ့ပါးသည်- ဖရဲသီးနှင့်အနက်ရောင်ပေါင်မုန့်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ စီရီရယ်၊
အခမဲ့နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာအတွက်အနည်းဆုံးထိရောက်မှုရှိစေသော၊ ဘယ်ရီသီး၊ ပုံမှန်အစားအစာ
အရွယ်အစားသည် ၅-၆ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးဖရဲသီးကိုနွေရာသီတွင် ၀ ယ်သည်။
အစာရှောင်တဲ့နေ့မှာဖရဲသီးစားတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။၎င်းကိုပုံမှန်အစားအစာကိုအနှောက်အယှက်မရှိသုံးနိုင်သည်။၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက် - ခန္ဓာကိုယ်အားသန့်ရှင်းစေရန်၊ အနားယူရန်နှင့်အနည်းငယ်ညှိရန်၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
စင်းဘယ်ရီသီးနှင့်ဖရဲသီးအလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအတွက်နှစ် ဦး စလုံး၏အဓိကအားသာချက်မှာသင်မီးဖိုမှာမတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ရိုက်ခြင်း (သို့) တစ်ခုခုမွှေခြင်းမပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးတော့ဖရဲသီးဟာပြီးစီးတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ၊ မင်းအစိပ်တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမင်းပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။
တစ်နေ့လုံးဖရဲသီးစားခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။ဤဘယ်ရီသီးသည်သခွားသီး (သို့) kefir ထက်များစွာပိုနှစ်သက်သည်။ဆိုလိုသည်မှာတင်းကျပ်သောအစာများစားလေ့ရှိသောကိုယ်ခန္ဓာအတွက်တစ်ရက်တာအစာရှောင်ခြင်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
ကြာချိန်: ၁ ရက်
အစားအစာ: ဖရဲသီး၊ အနက်ရောင်ပေါင်မုန့်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စီရီရယ်၊ ပျားရည်၊ ဆေးဘက်ဝင်လက်ဖက်ရည်
အားနည်းချက် - တင်းကျပ်သောအစားအစာနှင့်ယှဉ်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်။
အခြေခံမူ - နံနက်စာနှင့်နေ့လည်စာအတွက်ဖရဲသီးစားခြင်း။
ဖရဲသီးအလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်လျှင်ဖရဲသီး ၁ ကီလိုဂရမ်
မနက်စာ- ဖရဲသီးတစ်လုံး၏ ၁/၃၊ ပျားရည်လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းနှင့်အတူဆေးဖက်ဝင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်
ညစာစားပွဲ- ပြုတ်ထားသော zucchini၊ မုန်လာဥနီ၊ ဘရိုကိုလီတို့နှင့်ပြောင်းဆန်
ဖရဲသီးသည်လက်တွေ့တွင်မည်သည့်တားမြစ်ချက်မှမရှိသောထူးခြားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမြောက်အများစားသုံးခြင်းသည်အစာအိမ်ပြဿနာ၊ လေပွခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းကိုကလေးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက်သာကန့်သတ်သင့်သည်။
ဖရဲသီးစားသုံးခြင်းမပြုမီသင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးရောဂါများရှိနေသောအခါဤရောဂါများမှထုတ်ကုန်ကိုမစားသုံးနိုင်သောကြောင့်အစာကိုစွန့်ပစ်သင့်သည်။
Berry သည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအရာမဟုတ်။ထို့ကြောင့် minke whale ကိုစားသည့်အခါအဓိကအချက်မှာအတိုင်းအတာကိုသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဖရဲသီးသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အလွန်ထိရောက်သည်။ဤဘယ်ရီသီးကိုအခြေခံသောအစားအစာသည်ငါးရက်အတွင်း ၃-၇ ကီလိုဂရမ်ကျစေသည်။